को,रोना भाइरसले सि’ध्याएको को,रोना सं,क्रमितको फोक्सो फेरियो , सम्मान स्वरुप शेयर गर्नुहोस!
एजेन्सी । अमेरिकामा को,रोना सं,क्रमित एक वि’रामीको फोक्सो प्र’त्यारोपण सफल भएको छ । शि’कागोस्थित न’र्थवेस्टर्न मे’डिसिन अस्पतालमा को,रोना सं,क्रमित एक युवतीको फोक्सो प्र’त्यारोपण सगरिएको हो ।को,रोना भाइरस सं,क्रमणका कारण फोक्सो काम न’लाग्ने भएपछि फो’क्सो प्र’त्यारोपण गरिएको हो । भारतीय मु’लका फोक्सो प्र’त्यारोपण विशेषज्ञ डाक्टर अंकित भारतको टि’मले यो श’ल्यक्रिया गरेको हो ।को,रोनाको म’हामारी सुरु भएपछि सं,क्रमित वि’रामीमा फोक्सो प्र’त्यारोपण गरिएको यो पहिलो पटक हो ।
डा. अंकितका अनुसार २० बर्षीया युवतीको फोक्सो प्र’त्यारोपण गरिएको हो ।उनका अनुसार यो अ’प्रेशन सम्पन्न हुन १० घण्टा लागेको थियो । चिकित्सा क्षेत्रमा यो समयलाई औसत भन्दा बढी मानिन्छ । फोक्सो प्र,त्यारोपण गर्ने टि’मको ने’तृत्व गरेका डा. अंकित भारतले बताए, ‘वि’रामीको फोक्सो पुरै काम न’लाग्ने भएको थियो । मु’टु र छातीको भित्री भित्ता तथा यी सबै अं’गहरुलाई छोप्’ने मां’शपेसीको पातलो झि’ल्लीका को’शिकाहरु पुरै सु’केका थिए । को,रोना भाईरसको अ’धिक सं,क्रमणका कारण फोक्सो काम न’लाग्ने भएको थियो ।
यो अवस्थालाई ए’न्टीबायोटिक औ’षधिले पनि नि’को पार्न सकिंदैन ।’ डा.अंकितका अनुसार वि’रामीको जीवन ब’चाउन फोक्सो प्र’त्यारोपण बाहेक अरु उ’पाय थिएन । यो अ’प्रेशनका लागि वि’रामीले २ दिन प्र’तिक्षा गर्नुपरेको थियो ।किनकी दुई दिन पछि मात्रै म’स्तिष्क मृ’त्यु भएका फोक्सो दा’न गर्ने ब्यक्ति भेटिएका थिए । यसअघि पनि अस्ट्रेलियामा ४५ बर्षीया एक महिलाको फोक्सो प्र’त्यारोपण गरिएको थियो । तिनको पनि को,रोना भाइरस सं,क्रमणका कारण फोक्सो फेल भएको न्युयोर्क टाईम्सले जनाएको छ ।